Articles – Page3– Kathmandu Baptist Church 'Ebenezer'
आज संसारभर गर्भ पतन कुनै संकोचविनै ठूलो मात्रामा गर्ने गरिन्छ। धेरैले सोंच्छन् कि गर्भ पतन गर्नु महिलाको अधिकार हो। सोंच्ने गरिन्छ कि पाठेघरबाट बाहिर ननिक्लेसम्म त्यो बच्चा मानिस नै होइन। तर परमेश्वरको वचनले यस विषयमा के भन्दछ त? के गर्भ पतन उचित छ? कि यो चाहिँ घिनलाग्दो पाप हो? बाइबलले...
December 22, 2017 Posted By: UJ Gurung Articles No comments yet
आहा! यो संसार कति रमाइलो थियो होला? मलाई सृष्टि गर्नुहुने मेरो सृष्टिकर्ताले यो संसारलाई यस्तो सुन्दर बनाउनु भएकोमा म कति धन्यवादी हुन्थें होला। जब म मेरो आमाको गर्भमा हुर्कंदै थिएँ मेरो सृष्टिकर्ता परमेश्वरले मलाई एक कोषबाट अनगिन्ती कोषहरूमा बृद्धि र विकास गराउनुभयो म सम्झन्थें मेरो आमाले मलाई उनको ममता र...
December 17, 2017 Posted By: admin Articles Christmas 1
आज नेपाली ईसाई जगतमा क्रिष्टमस मनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। डिसेम्बर २५ लाई ख्रीष्ट येशूको जन्म भएको दिन भन्दै धुमधामसाथ क्रिष्टमस मनाउने गरिन्छ। एक हिसाबले हुन पनि हो…हामी मान्छेको जन्म दिन त कस्तो धुमधामसाथ मनाउँछौं भने झन् ख्रीष्ट राजाको जन्मोत्सव त अवश्य नै भव्य हुनै पर्यो नि। त्यसैले क्रिष्टमस आउन धेरै...
December 15, 2017 Posted By: admin Articles Bible Study No comments yet
परमेश्वरको वचन बाइबलको प्रभावकारि अध्ययनको लागि तीन कुराहरू अपरिहार्य छन्। यी तीन कुराहरू क्रमैसँग गरिँदा बाइबल अध्ययन आशिषमय र बढि फायदाजनक हुँदछ। १. पढ्नुहोस् (Read) २. व्याख्या गर्नुहोस् (Explain) ३. व्यवाहरिकतामा ल्याउनुहोस् (Apply) १. पढ्नुहोस् सबै भन्दा पहिले बाइबलको कुनै खण्ड छानेर पढ्नुहोस्। पूरै अध्याय पढ्न सकिन्छ या केहि पदहरू...
November 21, 2017 Posted By: UJ Gurung Articles No comments yet
प्रेम के हो? यूहन्ना ३:१६ किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्नो एक मात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस्, तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। (परमेश्वर पिताको प्रेम) रोमी ५:८ तर परमेश्वरले हामीतर्फ आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ, हामी पापी हुँदा हुँदै...
October 28, 2017 Posted By: UJ Gurung Articles No comments yet
प्रिय मित्र, तपाई जो हालैका वर्षहरुमा आङसाङ होङद्वारा संस्थापित तथा झाङ गिल्झाद्वारा प्रवर्द्धित ‘परमेश्वरको मण्डली’ भनिने समूहमा प्रवेश गर्नुभएको छ यहाँलाई मेरो प्यार र अभिवादन छ। तपाईमा परमेश्वरको वचनको सही अर्थ जान्ने र परमेश्वरको इच्छामा सुम्पने जुन जोश र जाँगर छ त्यसमा मेरो सहानुभूति छ। अब एउटा कुरामा होश पुर्‍याउनुहोस्।...
October 28, 2017 Posted By: UJ Gurung Articles 1
हालैका वर्षहरुमा कोरियाली आन साङ होङ (Ahn Sahng-Hong) नामक व्यक्तिद्वारा संस्थापित तथा झाङ गिल्झा (Zang Gil-Jah) नामक महिलाद्वारा विश्वव्यापी रुपमा प्रचारित ‘वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च अफ गड’ समूहले काठमाडौं लगायतका क्षेत्रहरुमा बसोबास गर्ने ख्रीष्ट्रियनहरुको घर-घरमा गई भ्रममा पार्ने ख्रीष्ट माथिको विश्वासबाट भड्काउने प्रयास गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी बाइबलीय शिक्षामा...